Isitudiyo esithokomele Eduze ne-Baga Beach ne-Forest View 2109A - I-Airbnb
Isitudiyo esithokomele Eduze ne-Baga Beach ne-Forest View 2109A
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Agyat
U-Agyat Ungumbungazi ovelele
Yindawo ekahle kakhulu yokuchitha isikhathi esimnandi e-Goa. Itholakala emphakathini ongu-24/7 obiyelwe we-Posh ne-Luxury complex enendawo yokubhukuda yokulingisa. I-Baga Beach cishe ingamakhilomitha angu-2 & eduze nemakethe edumile ye-Club Cabana & ngoMgqibelo ebusuku. Indawo yi-Studio esine-inthanethi enejubane eliphakeme (ijubane elingaphezu kuka-150 mbps) nekhishi elincane, i-Toilet & uvulanda onendawo yokubuka amahlathi. Isesitezi sokuqala futhi isendaweni yemvelo nokuthula. Amabhishi afana ne-Calangute, i-Vagator, i-Candolim ne-Anjuna asondelene kakhulu.
Indawo yi-Studio esine-inthanethi enejubane eliphakeme (ijubane elingaphezu kuka-150 mbps) ikhishi elincane, ithoyilethi & uvulanda onendawo yokubuka amahlathi. Isesitezi sokuqala futhi isendaweni yemvelo nokuthula. Amabhishi afana ne-Calangute, i-Vagator, i-Candolim ne-Anjuna asondelene kakhulu.
Kukhona umbhede owodwa wobukhulu beNdlovukazi, i-inthanethi ye-Ethernet enejubane elingaphezulu kuka-150 mbps, I-LED Smart TV, iziteshi ze-satellite, izihlalo ze-Tata Sky, Iwodrophu, Ikhishi elisebenza ngokugcwele elinamanzi, Usofa ne-Balcony.
Ikhishi: Isebenza ngokuphelele ngegesi, izitsha zokupheka, isiqandisi esincane, ikhabethe lasekhishini, iketela likagesi kanye nesihlanzi samanzi.
Isevisi yemibono iyatholakala futhi ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe.
• Ukuxhumeka kwe-inthanethi kwe-Ethernet broadband okusheshayo okungaphezu kuka-150mbps.
•Uvulandi onehlathi nokubukeka kwemvelo.
• Le ndawo inendawo yokuzivocavoca nendawo yokubhukuda.
• Izitebhisi kanye nezitebhisi zombili ziyatholakala .
• I-AC & ifulethi le-studio elimiswe kahle.
• Le ndawo inikeza ukuphepha okungu-24x7 nge-CCTV. Indawo ezungeze le ndawo eyakhiwe ngamatshe iphinde ibe yindawo evikeleke kakhulu.
• Ukubukeka kahle kwamagquma e-Arpora usuka endaweni eyinkimbinkimbi.
•Sizohlinzeka ngamathawula namashidi, kodwa isivakashi kuzodingeka sihlele insipho yaso namaphepha asendlini yangasese.
I-Club Cabana engamamitha angu-100
Amanye amabhishi adumile:
1. I-Baga - imizuzu engu-5 yokuhamba 2kms
2. I-Anjuna - imizuzu engu-8 yokuhamba nge-scooter
3kms 3. I-Calangute - imizuzu engu-8 yokuhamba nge-scooter
3kms 4. I-Vagator - imizuzu engu-7 yokuhamba ngesithuthuthu
Bangangishayela ucingo noma nini, ngihlala e-Goa kodwa hhayi efulethini lezivakashi
UAgyat Ungumbungazi ovelele